မြန်မာအမျိုးသမီးဆိုတာ……. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မြန်မာအမျိုးသမီးဆိုတာ…….
Posted by manawphyulay on Jan 31, 2011 in Creative Writing, Critic, Drama, Essays.., Poetry, Short Story | 11 comments
ဂုဏ်တောင်ယူမိပါသေးတယ်။ ဒီလိုပဲ ကိုယ့်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘ၀ကို အားကျပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့ အနောက်နိုင်ငံအများစုလည်း ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာမြန်မာဟေ့လို့ ပြောလို့ရအောင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဟာ တိုင်းတပါးတွေနဲ့ မတူအောင် သိမ်မွေ့နုးညံ့လှပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ သိမ်မွေ့လှတဲ့အပြုအမူ၊ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံတွေဟာ ခုမှမဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်တဲ့သူတွေကိုတောင် နှာခေါင်းရှုံ့ချင်ကြသေးရဲ့။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။ မြန်မာတွေရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ၊ ရိုးရာဓလေ့ နောက်မြန်မာမှုမြန်မာ့ဟန်နဲ့လုပ်တဲ့ ရိုးရာပွဲတော်တွေ ဘယ်လောက်ကျက်သရေရှိသလဲ။ ခုဆို မြန်မာအမျိုးသမီးတော်တော်များများ ပိုက်ဆံရရင်ပြီးပြီးရော လုပ်ချင်ရာလုပ်နေတာတွေဟာ ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုပ်သိုးသွားသလို ခံစားမိပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း တွေ့ရတာတွေက ခေတ်ရှေ့ပဲ ပြေးနေတာလား။ ခေတ်ဆန်နေတာလား။ ကိုယ်ကပဲ ခေတ်တုံးနေတာလားဆိုတာ မသိတော့ပါဘူး။ ကျွန်မဆိုလိုချက်က အလုပ်သွားတော့မယ်ဆိုရင် ထိုင်မသိမ်းဝတ်ပြီး သွားဖို့ ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အများအမြင် ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့ နေနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အနေအထိုင် အ၀တ်အစား အနည်းငယ် ပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တချို့ဆို ခုနောက်ပိုင်းတွေ့ရတာ မြို့လယ်ခေါင်တောင် ဖင်ပေါ်ခေါင်းပေါ်ဖြစ်နေကြတာတွေ အတော်များလာ မြင်တွေ့ရတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်နေရာရောက်နေလဲ နိုင်ငံများ မှားနေလား ထင်မိပါတယ်။ ဒါတောင် ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တက်ရင် ဘောင်းဘီတို စကပ်တိုမ၀တ်ရ ကန့်သတ်ထားတောင်မှ တက်ချင်တဲ့သူတွေက မနည်းမနော ရှိသေးတယ်။
မြန်မာ မန်းခလေးတွေ ၀တ်ပုံစားပုံ နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးကျနော် အမြင်ကတော့ သူ့နေရာ နဲ့သူ ကြည့်လို့ ကောင်းအောင် အမြင် မရိုင်းအောင် ၀တ်ရင် ဘဲ ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေနေပါပြီ။
ကိုဒီယားစတိုင်၊ ဘာစတိုင်၊ ညာစတိုင် ဒါတွေလဲ အားလုံးမြင်တွေ့ နေကြတော့ သူတို့လဲ လှချင်မှာပေါ့။ ဒီတော့ လိုက်တု ကြတာပေါ့၊ လိုက်ဝတ်ကြတာပေါ့။ နားလည်ပေးလိုက်ပါ။
အမြင်မရိုင်းအောင် သူ့နေရာနဲ့သူ ၀တ်ကြရင်ဘဲ မဆိုးဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။
ပို့စ်က တအားကောင်းတယ်ဗျာ။ တကယ်ပြောတာပါ။ မြန်မာပြည်ရာသီဥတုနဲ့၊ မြန်မာအမျိုးသမီးကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် အချိုးအစားနဲ့ဆိုရင် မြန်မာအ၀တ်အစား သာလျှင် အကောင်းဆုံး၊ အလှဆုံး၊ အယဉ်ဆုံးပါ။ ဟိုးအရင်ကလို ဘီးစပတ်ကြီးတွေ၊ လက်ရှည်ပွပွကြီးတွေ၊ ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ ဘလောက်စ်အင်္ကျီပုံဆန်းလေးနဲ့၊ ထမီရှည်ရှည်လေးနဲ့ဆိုရင် ရွက်ကြမ်းရေကြိုမိန်းကလေးတွေတောင် ကြည့်ကောင်းသွားတယ်။ ဆံပင်တိုတိုလေးနဲ့ဆိုရင်ကိုပဲ ရှင်းသန့်ပြီးလှနေတာ။
တရုတ်တန်းဘက်ရောက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် .. ပေါင်တိုမတွေ ၊ ဆပ်စလူးခါနေတာ …. မိန်းမချင်းတောင် နှစ်ခါပြန်ကြည့်ယူရတယ်… လှလွန်းလို့တော့မဟုတ်ပါ…ဒီလောက်အရှက်မဲ့တဲ့မျက်နှာ သေချာကြည့်ဦးမှဆိုပြီးကြည့်တာပါ ..။ သူတို့ကတော့ ဒီလိုကြည့်ခံရတာကို ဂုဏ်ယူနေတယ်ထင်ပါ့ ..။ ကမ်းခြေသွားလို့ ဒီလိုဝတ်စားဆင်ယင်မှူမျိုးက အထူးဆန်းမဟုတ်ပေမဲ့ .. ချမ်းနေတဲ့ဆောင်းညမှာ ပေါင်တိုတွေဝတ်ပြီး လျှောက်သွားနေတာက အမြင်ဆိုးပါတယ်…။ ဘုရားပေါ်ကိုလည်း ခိုးတတ်ပါတယ်… ပြီးတော့ မလုံမလဲထိုင်ပါတယ်…။ မြင်ရတဲ့လူက နောက်ကနေပြေးကန်ချင်စိတ်ကိုပေါက်ရောပဲ …။
အိမ်ကအဖေက စကပ် ၊ ဘောင်းဘီ မ၀တ်ရ လို့အမိန့် ထုတ်ထားလို့၁၀တန်းနှစ်ကတည်း စပြီး ထမိပဲ ၀တ်လာခဲ့ ပါတယ်။ အရင်ကတော့ သူများတွေဝတ်တာ ကြည့်ပြီး ၀တ်ချင်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ထမီဝတ်ရတာ အကြိုက် ဆုံးဖြစ် နေပြီ။ လုံခြုံပြီးလွတ်လပ်လို့ ။
ဟုတ်တယ် မြန်မာဆို မြန်မာပီပီလေးဝတ်စားတာကိုပဲကြိုက်တယ်
ဘယ်လောက်ချောချော အတိုအထွာ ၀တ်ရင် မလှတော့ဘူး
အရမ်းကောင်းပါတယ် ။နောက်ပိုင်းမှာ လည်း အဲလိုမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်သတ်တာလေးတွေ များများရေးပေးကြပါ ။ အားလည်းပေးတယ် ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုးစားနေပါတယ်။
ဂျပန်လည်း အနောက်တိုင်းကို အင်မတန်အတုခိုးတဲ့တိုင်းပြည်ပါပဲ..။
ဒါပေမဲ့ နေ့ကြီးရက်ကြီးဆို .. ကီမိုနိုတွေဝတ်ပြီး ထွက်ကြတာလည်းတွေ့ရတယ်..။
သာမန်အားဖြင့် ..ပေါင်ပေါ်နေတယ်..မလုံ့တလုံဆို … သိပ်တော့ဟန်မကျပါဘူး..။
ရထားပေါ်မှာ .. လမ်းဘေးမှာ..ကားဂိတ်မှာ.. ကိုယ့်ကိုယ်သူများက အလကားနေရင်း..မျက်စိစားပွဲထိုင်သွားမှာမဟုတ်လား..။
အထက်တန်းကျောင်းသူတွေကတော့ ..ပျော်ချင်ပါးချင်တာမို့ .. ငွေလိုချင်သမို့ ..လူခေါ်ချင်တာမို့ ဒီလိုလုပ်နေတယ် ထင်မိပါတယ်..။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ။ သာမန်မိန်းကလေးတွေနဲ့.. ရုံးသွားတက်နေသူတွေက .. သပ်သပ်ယပ်ယပ်နဲ့.. ၀တ်ကြပါတယ်..။
မီနီစကပ်နဲ့.. ကုပ်အကျီလေးနဲ့ဆိုတာမျိုးတွေက..တိုကျို ရုံချိန်ဆို .. မမြင်ချင်အဆုံးပါပဲ..။ ကျက်သရေရှိရှိလှကြပါတယ်..။
စနေ၊တနင်္ဂနွေ အလုပ်အားချိန်ဆိုရင်တော့ .. နည်းနည်းဆန်းလှလှလေးတွေ မြင်ရမှာပေါ့..။
အလုပ်ချိန်ပြင်ပ .. ဆိုင်ရာဒိတ်တွေရှိကြတာကိုး..။
မြန်မာပြည်ကိုလည်း .. ဒီလိုဖြစ်စေချင်တာပါ..။
အခုလိုဖြစ်နေကြတာတွေက … လူငယ်တွေအများစု.. အလုပ်(အချိန်ပိုင်း၊အချိန်ပြည့်)မလုပ်ကြလို့ လို့ထင်မိပါတယ်..။
လုပ်စရာအလုပ်ကို မရှိတာက တပိုင်းပေါ့..။
နောက်ပိုင်း တိုင်းပြည်တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ .. ချိန်ဆပြောင်းလဲသွားမယ်ထင်မိပါတယ်..။
အနောက်တိုင်း ကိုနှိုက်ကလည်း ..ရှေးကဆို..လေဒီတွေများ… ခြင်းတောင်းလိုဂါဝန်ရှည်ကြီးနဲ့.. ဦးထုတ်နဲ့.လက်အိပ်နဲ့လေ..။
ဒီလိုပဲ..ခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်အလိုက်သင့် မျောယင်း… အဆင်ပြေတာ ပြင်ယူလာရတယ်မဟုတ်ပါလား..။
ဦးခိုင်ရေ…………….. ဒီလိုဖြစ်နေတာဟာ ဒါနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ မနော မြင်မိပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အတုခိုးသင့် မသင့်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေ လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် တော်တော်များများ ရှိလာနေပါပီ လုပ်ချင်စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းလည်း ခေတ်နဲ့အလိုက် ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံတွေ ရှိနေပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ခင်ဘုန်းလိုပေါ့ ၀တ်တော့ မြန်မာဝတ်စုံ လူမြင်ကောင်းလား မကောင်းလားမစဉ်းစားဘူး။ အဲလိုဝတ်တာကျတော့လည်း ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။